Iwe unogona kuyera zvese-zvinosanganisirwa nzvimbo nemubairo?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » Iwe unogona kuyera zvese-zvinosanganisirwa nzvimbo nemubairo?
Awards • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Yese-inosanganisira resort Sandals & Beaches misoro mibairo
Mibayiro haina kupihwa chete kune chero munhu. Ivo vanofanirwa kuwanikwa kuburikidza nekushanda nesimba uye kutsungirira. Uye kana mibairo ichiyera kubudirira kwenzvimbo yekutandarira, inozivikanwa inozivikanwa-inosanganisirwa nzvimbo inozivikanwa se Sandals Resorts akagamuchira mibairo mizhinji uye kuzivikanwa, semazana, zvekuti hapafanire kuve nenzvimbo yekukahadzika yezinga reumbozha nekushandira idzi nzvimbo dzese-dzinosanganisira dzinopa zororo rehupenyu hwese. Zororo rinoshamisa kwazvo, kamwe chete muhupenyu hwese harikwani uye rinoshanduka kuita sarudzo dzakanaka zvekare uye zvakare.
Shangu hadzina kugadzira iyo-inosanganisa pfungwa, asi yakazvizadzisa. Kwemakumi matatu emakore, yawana mubairo wega wega wekutambira uye kurumbidzwa muindasitiri, ichiisa Sandals leagues pamusoro chero imwe nzvimbo- inosanganisira nzvimbo yekutandarira.
Nepo Sandals isiri chete yepasirese yepamusoro mumaziso eindasitiri yekufamba, ndiyo inzvimbo yekufarira yeiyo Luxury Inosanganisirwa Zororo mumoyo yevakaroora kutenderera pasirese. Sandals 'mubairo mukuru pazvose ndeye yakakwira mwero wekugutsikana kwevaeni iyo yainofarira, ichikurudzira nzvimbo dzekugara kuti dzirambe dzichipa iro rekupedzisira zororo ruzivo muCaribbean.
Heano marumbidzo ayo ese-anosanganisira resort Sandals akahwina mumakore apfuura achiiisa mu stratosphere yekupa mubairo-kuhwina ese-anosanganisira maresitoreti.
IWorld Travel Awards yakavambwa muna1993 nechinangwa chekubvuma uye kupemberera kubudirira munzvimbo dzese dzeindasitiri yekushanya neyekushanya yepasirese. Mushandirapamwe wega wega wekuvhota unosvika zviuru zvevashandi vekufamba pasirese mune dzinopfuura nyika zana nemakumi matanhatu. Shangu dzakatumidzwa kunzi Kambani Inotungamira Yenyika-Inotungamira Yenyika kwemakore makumi maviri nemana akateedzana, pakati pemamwe akawanda eWorld Travel Awards mumakore ese.
EarthCheck ndiyo inotungamira pasainzi yekumisikidza masitifiketi uye boka rezano rekufamba nekushanya. Kubva 1987, ivo vakabatsira mabhizinesi, nharaunda uye hurumende kuendesa yakachena, yakachengeteka, yakabudirira uye ine nzvimbo dzakanaka kune vafambi yekushanyira, kurarama, kushanda uye kutamba. Ivo vanoziva kuti izvo zvinogona kuve zvakanakira nyika zvakare zvakanaka kune bhizinesi. Nzvimbo shanu dzeSandals dzakapihwa Master Certification.
Vaverengi veZvitsuwa vanoda zvese-zvinosanganisirwa nzvimbo dzekugara. Sezvo vese vapepeti vavo uye vaverengi vakatarisa mukati memazana ezvese-anosanganisira maresitoreti mukati memakore, ivo vanoziva chinhu kana zviviri nezve izvo zvinoita iyo yese-inosanganisirwa nzvimbo kupenya. Idzi nyanzvi dzakaronga nzvimbo dzepamusoro nhatu dzezvitsuwa mumapoka gumi nemaviri zvichienderana nezvipo zvekumira, kubva kumusoro-notch yekudyira sarudzo uye inotonhorera mabhawa kuenda pamusoro-e-pamusoro masuti uye chena-girovhosi mudiri basa. Sandals yakahwina mibairo yakawanda inoratidza kuti nei iri yeakanakisa: Akanakisa Akasanganisira Amenity, Akanakira Varoorani, Yakanyanya Dziva, Kamuri Yakanyanya, Yepamusoro pemvura Bungalow, Best Butler Servicer, uye Best Bar.
USA Nhasi 10 Yakanyanya Readers 'Sarudzo Mipiro
10Best.com, inopa vashandisi neyekutanga, isina rusaruro, uye ruzivo rwekufamba zvemukati zvezvakanaka zvepamusoro, zvinhu zvekuona nekuita, uye maresitorendi enzvimbo dzepamusoro muUS uye kutenderera pasirese. Pakati paro pane timu yenyanzvi dzekufambisa dzemuno: boka rakafamba-famba uye rakadzidziswa kwazvo vasiri ivo chete nyanzvi muminda yavo - nemaguta avo - asi vachisarura mune zvavanofarira. Idzi nyanzvi dzemuno dzinogara muguta ravanonyora nezvazvo, riine zvinyorwa zvinogara zvichiratidzwa. Sandals Emerald Bay Golf Course yakanzi Best Carribean Golf Course gore rino, 2020, uye muna 2017, maresitoreti maviri akaita gumi Akanakisa eCaribbean Resorts runyorwa, anoti Sandals Royal Kudyara uye Sandals LaSource Grenada Resort & Spa.
Sangano repasi rose rekudzidzisa pachikwata chekutsvaira rinokudza kugona kweSandals Resorts International kweanopfuura zviuru zana zvePADI zvitupa mumabhichi ese uye maSandals Resorts kubvira kuve nhengo yekambani nePADI kwakatanga muna 100,000. Mubairo uyu unozivawo mupiro usingaenzanisike kudzidzo yekutsvaira muCaribbean yese. Sandals Resorts akagamuchira Mubairo weKubudirira Kubudirira gore rapfuura mu1997.
Iwo maTravvy Awards egore negore, anounzwa netravAlliancemedia, vanoona iwo akanyanya mwero ekugona muindasitiri nhasi uye vanokudza makambani ekufambisa, zvigadzirwa zvekufambisa, vamiriri vekufamba nenzvimbo dzekubudirira kwavo kwakanyanya. Iyo mibairo yave yakawanda pamusoro pemakore: Yakanyanya Hotera Chain - All Inosanganisira; Yakanakisa Zvese-inosanganisira Resort Yekusvikira Michato; Best Yese-inosanganisira Vakuru / Couples Resort, Caribbean / Bahamas; Yakanakisa All-inosanganisira Luxury Resort, Caribbean / Bahamas; Yakanakisa Destinaton Yemuchato Resort, Caribbean / Bahamas; Yakanakisa All-inosanganisira Luxury Resort, Caribbean / Bahamas; Best Luxury Hotel Chain; Best Honeymoon Resort; Yakanakisa Resort muCaribbean; Akawanda Anogadzira All-anosanganisira Resort Executive; Yakanakisa Yemahotera Hotera / Resort muCaribbean; Yakanakisa Mhuri Hotera / Resort muCaribbean; uye Yakanakisa All-inosanganisira Resort Chain, kutumidza vamwe.
American Academy Yekugamuchira Vaeni Sayenzi
Iyo International Star Diamond Mubairo chimwe chezviratidzo zvine mukurumbira zvebudiriro kune indasitiri yekufamba. Kusarudzwa kunowanzoendeswa nevashanyi venyika uye maindasitiri nyanzvi uye kunatsiridzwa neDare reMatirastii zvichibva mukuzvipira kwemusarudzo kuita kugona muumbozha uye nebasa mukati mechikamu chakatarwa nemaindasitiri, kusanganisira kugamuchira vaeni, maitiro, mhando uye hutsanana. Pano mibairo iyi ndeyeNyeredzi, uye Sandals akahwina mibairo isingaverengeke makore kubva paChishanu Star kusvika kuSitatu Star Diamond uye Six Star Green Diamond futi.
TripAdvisor® Chitupa Chekunaka
Chitupa cheKunaka kubva kuTripAdvisor® chinopihwa chete kumahofisi anogara achiwana ongororo dzakasarudzika dzevashanyi paTripAdvisor®, nharaunda huru yekufamba munyika. Uku kubudirira kwakatanhamara kunoratidza kuzvipira kunoramba kuripo mukupa vashanyi basa repamusoro uye zvinowanika muCaribbean yese. Zvitifiketi zveKubudirira zvakawandisa zvekuverenga nekufamba kwenguva kweSandals pamwe neimwe yeTop 25 Mahotera eRomance muCaribbean.
Kufamba Kwevhiki nevhiki Magellan Makomborero
Kubva pane dhizaini yekushambadzira kune masevhisi, iyo Yekufamba Kwevhiki Svondo Magellan Mipiro inokudza akanakisa mukufamba uye inosaruta nyanzvi dzakashama dzekufamba shure kwadzo dzese. Mapindiro anogamuchirwa kubva kumasangano epamusoro ekufamba uye nyanzvi pasirese, izvo zvakaratidza basa rakanakisa. Yese-inosanganisirwa nzvimbo yekutandarira Sandals yakahwina yakawandisa Sirivheri neGoridhe Mipiro yezvinhu zvese kubva kuLuxury kusvika Kuvimbika kune Eco-Shamwari uye nezvimwe.
TravelAge West West WAVE Mubairo
Iyo TravelAge West WAVE (Western Agents 'Votes of Excellence) Mhemberero ndeyekupemberera kwekugona muzvigadzirwa zvekufambisa, masevhisi nenzvimbo. Gore rega rega vafambi vevamiriri uye vaverengi veTravelAge West vanovhota pane akanakisa-e-e-akanakisa kubva pane rondedzero yeMupepeti's Sarudza vanogashira mibairo iyo yakasarudzwa mushure mekunyatsoongorora neTravelAge West Edhi-in-Chief neboka revanyori. Ongororo nzira dzakasanganisira kuongororwa kwechigadzirwa, kushanya panzvimbo, saiti yeboka rakasarudzika revamiriri vekufamba uye nekutsvaga paInternet. Shangu dzakatora mibairo gumi nemana mumakore achangopfuura kubva kuTravelAge.
TripAdvisor® Vafambi 'Sarudzo Mipiro
Yegore reTripAdvisor® Vafambi 'Sarudzo Mubairo wakavakirwa pamamirioni eongororo yakakosha uye maonero kubva kune vafambi kutenderera pasirese vanofukidza zvinopfuura zviuru zvehotera. Ivo vanozivisa akatanhamara epasirese zvivakwa pasirese mune akati wandei ezvikamu zvinobva kuTop Hotels, Luxury, uye Bargain, kune Service, Madiki Mahotera, uye B & Bs uye Inns. Sandals zvivakwa zvakahwina mibairo yeTop 10 neTop 25 muzvikamu zvinosanganisira All-inclusive Resorts muCaribbean, Luxury Resorts muCaribbean, Hotels for Romance, Hotels muCaribbean, uye Hotels for Service.
MLT Zororo Yemahara Simbiso Mibairo
Iyo Quality Assurance Mubairo inoziva iro rakasarudzika boka remahotera uye nzvimbo dzekutandarira dzinowana 99% yevatengi kugutsikana mamaki, uye 99% kuendesa kwechigadzirwa kuita. MLT Zororo rinoshandisa mubairo uyu kusiyanisa iwo mahotera ari kuita aya mamakisi epamusoro. Mhedzisiro Yekusimbisa Mbairo yakakundwa neakawanda kwazvo maSandals zvivakwa gore rega rega munguva dzichangopfuura.
Kufamba + Kwekuzorora Kwenyika Kwakanyanya Mibayiro
Kufamba + Zororo Mahotera Akanakisa epasirese anomiririra mahotera akapihwa yepamusoro pasirese, sekusarudzwa nevaverengi vanonzwisisa veTravel + Leisure. Kwemakore, Sandals yakatumidzwa mazita epamusoro 25 Mahotera muCaribbean, Bermuda, neBahamas pamwe neTop Hotel Spa muCaribbean kakawanda.
Flight Center USA ndeimwe yemakambani anotungamira epasirese ekushanya epasirese anopa mazano ezvekufamba pamwe nehurongwa hwekuronga zororo, uyezve vanokudza vatungamiriri veindasitiri gore rega rega. Ongororo dzinoendeswa kune vese Liberty Travel Agents, FCm Travel Solutions vashandi, vamiriri veGOGO vekuchengetedza pamwe nevashandi vese veFlight Center kumuzinda. Pano zvakare, ese-anosanganisira resort Sandals akahwina mibairo mizhinji yakanyanya kusanganisira Honeymoon Resort, All-inclusive Chain, Customer Service, Luxury Hotel, uye Travel Agent Training Chirongwa.
Condé Nast Mufambi Wegore Negore Readers 'Sarudzo
Kwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu, Condé Nast Traveler's Readers 'Choice Awards vakaziva mahotera akanakisa epasirese, ngarava dzezvikepe, uye nendege kuburikidza neongororo yakapedzwa nevaverengi vane ruzivo. Kubva kuVaverengi 'Sarudzo Mubairo kuenda Kumahotera Akakwirira muCaribbean neTop Resorts muAtlantic, Sandals yakahwina iwo gore rese gore.
PADI Green Nyeredzi Mubairo
Uyu mubairo wepamusoro unopihwa kuPADI Dive Centres uye Resorts avo vakawana iyo Green Star Mubairo nekuratidzira kuzvipira mukuchengetedza pamabasa akasiyana siyana ebhizinesi anosanganisira: kuchengetedza mvura, kushandiswa kwesimba, nezvimwe. Dzese Sandals Resorts dzakunda iyo PADI Green Star Mubayiro.
Kufamba + Yemahara Magazini e500 Yakanakisa Pasi Pose
Kufamba + Kuvaraidza kwegore rose kweye mazana mashanu emahotera epamusoro-soro pasi rese sekusarudzwa nevanoverenga nyanzvi. Pano, Sandals yakatumidzwa kunzi Best World Hotels, Caribbean, zvakare, gore negore, resort after resort.
Vakaroora Vakanakisisa Honeymoon Tuzo
Gore rega rega, magazini yeVakaroora inopa vaverengi vayo hunyanzvi hwekutora munzvimbo dzepamusoro dzehusiku kutenderera pasirese. Sarudzo dzavo dzekupedzisira dzinounzwa mune zvinyorwa fomu mumagazini avo emwedzi nemwedzi. Nzvimbo dzakasiyana dzeSandals Resorts dzakatumidzwa mibairo kubva pano pamusoro pemakore anosanganisira Top All-inclusive Resort Brands, Top Resorts muCaribbean, Top All-inclusive Resorts, nezvimwe.
'Vanodiwa Nevaenzi' Vanokunda vanopihwa kumidziyo inounza yakanakisa nhanho yebasa revashanyi ine chiyero chevanopfuura vana pavashanu. & Spa Resort vese vakatumidzwa kuti 'Vanodiwa Nevaenzi.'